कम्पनी विश्लेषण वाग्मती डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण वाग्मती डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
on: ५ माघ २०६८, बिहीबार ००:०० लगानी 11 views
कम्पनी विश्लेषण वाग्मती डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
वाग्मती डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
कम्पनीको नाम:वाग्मती डेभलपमेण्ट बैङ्क लि.
वर्गीकरण: क्षेत्रीयस्तरको विकास बैङ्क
सम्पर्क कार्यालय : हरिवन–९, सर्लाही
स्थापना : २०६५ चैत १०
अध्यक्ष : राधामणि खतिवडा
सीईओ : प्रदीपकुमार चालिसे
संस्थापक शेयर : ५३ प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर : ४७ प्रतिशत
क्षेत्रीयस्तरको विकास बैङ्कका रूपमा स्थापना भएको यो बैङ्क हाल सर्लाही जिल्लाबाट मात्र आफ्नो वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैङ्किङ, शैक्षिक, कृषि, व्यवस्थापन तथा व्यापार क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा २०६५ चैत १० मा यो बैङ्कको स्थापना भएको हो । हाल सर्लाही लालबन्दीको मुख्य कार्यालयबाट मात्र वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको यो बैङ्कले आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय थप गर्ने बताएको छ ।
शुरूमा रू. १ करोड ४० लाखबाट कारोबार थालेको यो बैङ्कको चुक्ता पुँजी अहिले रू. २ करोड ६५ लाख पुगेको छ । संस्थापक शेयरधनीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरी करीब शतप्रतिशतले पुँजी बृद्धी गरेको यो बैंकले चुक्ता पुँजी साधारण शेयर निष्कासन गरेपछि रू. ५ करोड पुग्नेछ । आगामी माघ ८ देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरी रू. सय दरका २ लाख ३५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने बैङ्कको योजना छ ।
हालै बैङ्कले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रअनुसार सञ्चालनको करीब १ वर्षको अन्तरालमा सस्ंथापक शेयरधनीहरूको सङ्ख्यासहित चुक्तापुँजी बृद्धी गरेर रू. २ कराडे ६५ लाख पुर्याएको छ । साधारण शेयर निष्कासन पश्चात यसको चुक्ता पुँजी रू. ५ करोड पुग्नेछ । साथै, यो बैङ्कले आव २०६९÷७० मा एकबराबर एक (१:१) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने बताएको छ ।
आव २०७०÷७१ देखि शेयरधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्ने बैङ्कको लक्ष्य छ । त्यसैगरी विगतमा ऋणात्मक अवस्थामा देखिएको बैङ्कको सञ्चित कोष चालू आव २०६८÷६९ को प्रथम त्रैमाससम्ममा रू. ४ लाख पुगेको छ । आव २०६८÷६९ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार हाल बैङ्कको खुद मुनाफा रू. ४ लाख ४७ हजार रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैङ्क रू. ६ लाख ७९ हजार खुद नोक्सानमा थियो ।
त्यसैले, बैङ्कको ऋणात्मक जगेडा कोष धनात्मक भएको हो । साथै, यो बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन पनि १७ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. ९ करोड ६० लाख पुगेको छ । यस बैङ्कले हालसम्म सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको देखिँदैन भने कर्जा–सापटी अघिल्लो आवको तुलनामा ४५ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि गरेर हाल रू. ८ करोड ४० लाख पु¥याएको छ । त्यसैगरी खुद ब्याज आम्दानी रू. १६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको भन्दा ६३ दशमलव ८८ प्रतिशतले धेरै हो । सोही अवधिमा यस बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा १ सय ६५ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ४ लाख ४७ हजार पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा १ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा हाल शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गत पुस ९ मा सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारणसभामार्फत यो बैंकमा मा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान सक्ने विशेष प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो । हाल यो बैङ्कको किताबी मूल्य रू. ९८ दशमलव शून्य ७ रहेको छ । त्यसलाई आधार मान्दा यो बैङ्कले साधारण शेयर निष्कासन प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज मा सुचिकृत हुँदा यसको शेयर रू. २ सय ८० देखि रू. ३ सयसम्ममा कारोबार हुने देखिन्छ । साधारण शेयर निष्कासनपछि अर्को वर्ष पुन हकपद्र शेयर निष्कासन गर्ने बताएकाले शेयरधनीहरूले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।